I-Honor 8X ekudala ilindelwe ifika | I-Androidsis
IHonor 8X ekudala ilindelwe ifikile
URafa Rodríguez Ballesteros | | Iiselfowuni
Izolo kwinkcazo ye-Honor besinokubona uninzi iimveliso ezintsha eya kongeza kwikhathalogu yomzi mveliso. Ukongeza kwezinye iimveliso zikwalindelwe kwi-Honor ezinje ngesongo somsebenzi Hlonipha iBhodi 4. Kwaye enye iqonga elitsha levidiyo eya kongeza kunikezelo lwangoku olubanzi, Hlonipha iVidiyo, Evela esandleni se «Vice».
Kodwa eyona nto yatsala yonke ingqalelo yayikukufika kwe Hlonipha 8X, I-smartphone ethembisa okuninzi. Enye i-smartphone emangalisayo leyo ifika ukukhulisa ngakumbi inqanaba kuluhlu oluphakathi lwe-Android. Inqanaba eliphakanyiswa ziifemu zaseTshayina kwiindawo eziphakamileyo ekunzima ukuba zokoyiswa.
1 Ngaba i-Honor 8X iya kuba ngukumkani omtsha webanga eliphakathi?
2 Imbeko 8X iinkcukacha zobugcisa
3 Ngaba uqinisekile ngeNhlonipho 8X entsha?
Ngaba i-Honor 8X iya kuba ngukumkani omtsha webanga eliphakathi?
Mva nje, isixhobo ngasinye esiveliswe yinkxaso-mali yeHuawei ilawula ukutsala umdla kwintengiso. Kwaye yenza njalo kwizinto ezininzi; a uyilo ngononophelo, izinto ezisemgangathweni y ukusebenza kobude. Imbeko ikwazile ukufumana indawo yentengiso kunye nokufumana okuthembekileyo okulandelayo kuko konke ukukhutshwa kwayo.
I-Honor 8X ithembisa kakhulu ngayo yonke into esisinika yona. Kungekudala siza kuba nakho ukubona indlela yentengiso eziphatha ngayo kwaye ukuba ukuthengisa kwayo kufikelela kulindelo oluphezulu kakhulu. Enye yezinto ezimbalwa ebesingacacanga ngazo nge-100% ngamaxabiso aya kuthi athengiswe ngawo eYurophu. Ngaloo nto icociwe, kwaye ujonge ubuchwephesha bayo, ungangoyena mthengisi ubalaseleyo kwinxalenye yokugqibela yonyaka.
IHlonipho 8X yakhelwe ngaphakathi Iglasi yeglasi enefuthe elibonakalisayo eyandisa imigca egudileyo egobileyo. Enkulu isikrini kunye notshi loo nto ishiya i-intshi ezi-6 ngasemva. Inye ikhamera ye-duaUkuba iphakame kwiimodeli zangaphambili, iya kuba sesinye sezixhobo zayo ezikhulu. Kwaye ixabiso, nokuba liphezulu kunokuba bekulindelwe, linokuqwalaselwa njengelungileyo.
Imbeko 8X iinkcukacha zobugcisa
Inkqubo yokusebenza I-Android Oreo 8.1 enomaleko we-EMUI 8.2
Isikrini 6.5 intshi
Ukugcina 64 / 128 GB
Cámara trasera I-20 + 2 Mpx kunye ne-LED
Ikhamera yangaphambili 16 Mpx
Ibhetri 3750 mah
Ubukhulu X x 160.4 76.6 7.8 mm
U bunzima 175 g
Imibala bomvu - bhlowu - mnyama - mfusa
Amanani € 249 - € 299
Ngaba uqinisekile ngeNhlonipho 8X entsha?
Ukuba sele uqinisekisiwe yi-Honor 8X entsha, sineendaba ezimnandi. Ukusukela ngoku ungayithenga kwiphepha elisemthethweni leMbeko. Kodwa ungayithenga nakwiivenkile eziqhelekileyo zombane kunye netekhnoloji, ukongeza kwiAmazon.
Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuba uthathe isigqibo kwi-Honor 8X. Ukuba sele ufumene eyakho, ulinde ntoni? Imbeko ifikile namhlanje ngeemveliso ezinomdla eziza kufumana ukubaluleka kwintengiso ngokuhamba kwexesha, ngakumbi i-8X entsha. Kwi-Androidsis, njengesiqhelo, xa sinethuba lokuyizama siza kukuxelela ngokweenkcukacha amava ethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHonor 8X ekudala ilindelwe ifikile
IMásMóvil yazisa iHuawei, BQ okanye iifowuni ze-LG kwifiber yayo eguqukayo kunye namaxabiso okuhamba
Ungawufaka njani umculo kuGoogle Play Music